अब्राहामको परिवार र माता परमेश्वरको आवश्यकता
अब्राहामको परिवार, र माता परमेश्वरको आवश्यकता
सेप्टेम्बर 27, 2017 फ्रेवुअरी 28, 2020 WMSCOGLeaveaComment on अब्राहामको परिवार, र माता परमेश्वरको आवश्यकता
अधिकांश मानिसहरू माता परमेश्वरको अस्तित्वप्रति अनविज्ञ छन् । त्यसैले तिनीहरू बाइबलद्वारा माता परमेश्वरको अस्तित्व र मुक्तिसँग उहाँको सम्बन्ध ’bout बुझ्न कोसिस गर्छन् । सोही उद्देश्यले परमेश्वरले अब्राहामको परिवारको इतिहास बाइबलमा समाविष्ट गर्नुभएको हो । विश्वासका पुर्खाहरूमध्ये अब्राहामद्वारा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई माता परमेश्वरको आवश्यताको विषयमा शिक्षा दिनुभएको छ ।
अब्राहाम र परमेश्वर
अब्राहामचाहिँ पुरानो करारका प्रमुख पात्रहरूमध्ये एक हुन् । परमेश्वरले अब्राहामको परिवारको इतिहासलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अब्राहामको परिवारको इतिहासभित्र कस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट अगमवाणी गरिइएको छ । येशूज्यूले दृष्टान्तद्वारा अब्राहाम र तिनको परिवारले कसलाई सङ्केत गर्दछ भन्ने कुरा प्रकट गर्नुभएको छ ।
“एक जना धनी मानिस थियो, जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहीन मलमल लगाएर दिनहुँ मोजमज्जामा बस्तथ्यो । उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एक जना गरीब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे । त्यो घावैघाउले भरिएको थियो । त्यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्राटाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो । कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे ।” “त्यो गरीब मानिस मर्‍यो, र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई अब्राहामको साथमा राखे । त्यो धनी मानिस पनि मर्‍यो र गाडियो । नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्‍यो, टाढामा अब्राहाम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो । अनि उसले कराएर भन्यो, ‘हे पिता अब्राहाम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदेओस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु ।’”
सामान्यतया मानिसहरू स्वर्ग गए भने, परमेश्वरको सँगमा रहेको कल्पना गर्ने गर्छन् । तर लाजरसको मृत्युपश्चात् येशूज्यूले तिनी अब्राहामको सँगमा गए भन्नुभएको छ । त्यति मात्र नभएर धनी मानिसले नजर उठाएर हेरे, र अब्राहामलाई “पिता” भनेर पुकारेका छन् । येशूज्यूले कडासित स्वर्गमा आत्मिक पिता, पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सिकाउनु भएको छ ।
“तिमीहरू पृथ्वीमा कसैलाई आफ्ना पिता नभन, किनकि स्वर्गमा तिमीहरका एउटै पिता हुनुहुन्छ ।”
अब्राहामले पिता परमेश्वरलाई सङ्केत गरेकाले, अब्राहामको परिवारले परमेश्वरको परिवारलाई सङ्केत गर्दछ ।
स्वर्गमा भएको मानिस परमेश्वर हुन सक्दैन, धनी मानिसले अब्राहामलाई “पिता” भनेर पुकारेकाले अब्राहामले स्पष्ट रूपमा पिता परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ । बाइबलमा यो अगमवाणी बाहेक अन्य उदाहरणहरूद्वारा पनि अब्राहामलाई पिता परमेश्वरको रूपमा सङ्केत गरेको छ ।
यसकारण तिमीहरूले यो जान, कि जस-जसले विश्वास गर्छन्, तिनीहरू नै अब्राहामका सन्तान हुन् ।
विश्वास गर्नेहरू नै परमेश्वरको सन्तान भनेर चुनिनु पर्ने होइन र ? तर किन तिनीहरूलाई, “अबाहामको सन्तान” भनेर बोलाइएको होला ? त्यो चाहिँ बाइबलको धेरै ठाउँमा अब्राहामले पिता परमेश्वरलाई सङ्केत गरेकोले गर्दा हो । अब्राहामले पिता परमेश्वरलाई सङ्केत गरेकाले, अब्राहामको परिवारले चाहिँ परमेश्वरको परिवारलाई सङ्केत गर्दछ । कसो गरेमा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा चुनिन सकिन्छ, र स्वर्गीय राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले अब्राहामको परिवारको उदाहरण दिनुभएको हो ।
अब्राहामको परिवारको तीन उम्मेदवारहरू
अब्राहामको परिवारमा अब्राहामको उत्तराधिकारको निम्ति तीन जना उम्मेदवारहरू थिए । एलीएजर, इश्माइल, र इसहाक । तर अन्तमा इसहाकले परिवारको उत्तराधिकार प्राप्त गर्छ । इसहाक किन अब्राहामको उत्तराधिकारको निम्ति चुनियो भन्ने कुरा थाहा भएमा, हामीले पनि कसो गरेमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं ।
तर अब्रामले भने, “हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईंले मलाई के दिनुहुन्छ र ? ’cause म सन्तानविहीन नै छु, मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलीजर हुनेछ ।” फेरि अब्रामले भने, “हेर्नुहोस्, तपाईंले मलाई सन्तान दिनुभएन, र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ ।” तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनीकहाँ आयो, “यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुनेछैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ ।”
त्यो समयमा, अब्राहामको आफ्नै छोरा नभएकोले, तिनले आफ्नो दास एलीएजरलाई उत्तराधिकारी बनाउने निर्णय गर्छन् । तर परमेश्वरले अब्राहामलाई तिनको आफ्नै छोरा मात्र तिनको उत्तराधिकार हुनेछ भन्ने वचन दिनुभयो ।
अर्को शब्दमा, तिनको आफ्नै छोरा हुनेछ भन्ने अर्थ हो ।
अनि हागारले अब्रामको एक जना छोरो जन्माई । हागारले जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्रामले इश्माएल राखे । हागारले अब्रामको निम्ति इश्माएल जन्माउँदा अब्राम छयासी वर्ष पुगेका थिए ।
अब्राहामकी पत्नी साराद्वारा सन्तान नुहुने भएको र उमेर पनि धेरै भएकोले तिनले आफ्नी कमारी हागारलाई अब्राहामको सन्तान जन्माउनको निम्ति दिइन् । अब्राहामले आफ्नो छोराको नाउँ इश्माएल राखे । इश्माएल अब्राहामको आफ्नै छोरा भए पनि तिनले अब्राहामको उत्तराधिकार प्राप्त गरेनन् । अब्राहामको दोस्रो छोरा इसहाकको जन्मद्वारा त्यसको कारण बुझ्न सक्छौं ।
अनि अब्राहामले परमेश्वरलाई भने, “इश्माएल नै तपाईंको आशिष्‌मा बाँचिरहे त हुन्छ ।” तब परमेश्वरले भन्नुभयो, “हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एक जना छोरा जन्माउनेछे, र तैंले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस् । म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु ।”
त्यो समयमा इस्राएलीहरूमा पितृसत्तात्मक सिद्धान्तअनुसार जेठो छोराले उत्तराधिकार पाउने चलन थियो । इश्माएल जेठो छोरा भएकोले तिनले उत्तराधिकार पाउनु पर्थ्यो, तर तिनले पाएनन् । तर परमेश्वरले इसहाकलाई उत्तराधिकार दिनुभयो । त्यसैले इसाहक पितृसत्तात्मक सिद्धान्तद्वारा नभई परमेश्वरको सिद्धान्तद्वारा चुनिएका हुन् । फेरि भन्ने हो भने, एलीएजरचाहिँ स्वतन्त्र बुबा र स्वतन्त्र आमाको सन्तान नभएकोले तिनले उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । इश्माएलको बुबाचाहिँ स्वतन्त्र अब्राहाम भए पनि तिनको आमा सारा नभएकीले उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । अन्तमा इसहाकले उत्तराधिकार प्राप्त गरे । त्यो चाहिँ उनी स्वतन्त्र अब्राहाम र तिनकी पत्नी साराद्वारा जन्मेकोले गर्दा थियो । इश्माएल र इसहाक बीचको भिन्नता नै उनीहरूको आमा थियो । अब्राहामको उत्तराधिकारी छनोट गर्नको निम्ति परमेश्वरले मातृ-नातालाई प्रयोग गर्नुभयो ।
परमेश्वरको उत्तराधिकार हुने अकाट्य शर्त
अब्राहामको परिवारको विस्तृत इतिहासले हामीलाई कसो गरेमा स्वर्गीय राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउछ । इसहाक स्वतन्त्र अब्राहाम र साराद्वारा जन्मेकोले उत्तराधिकार प्राप्त गरे जस्तै, हामी पनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरद्वारा जन्मेमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं । परमेश्वरले अब्राहामको परिवारद्वारा परमेश्वरको चुनिइएका बन्नको निम्ति माता परमेश्वर नै अकाट्य शर्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन खोज्नुभएको हो । उहाँको अस्तित्व नै हाम्रो मुक्तिको निम्ति अकाट्य शर्त हो ।
यहाँ “हाम्री” भन्नेहरू चाहिँ माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरका सन्तानहरू हुन् । साराले स्वर्गीय यरूशलेम, माता परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ ।
अब हे भाइ हो, इसाहाकजस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं ।
तीन जना उम्मेदवारहरूमध्ये, इसहाक साराबाट जन्मेकोले अब्राहामको उत्तराधिकार प्राप्त गरे । त्यसैगरी, माता परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू नै प्रतिज्ञा गरिएको स्वर्गीय राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको सन्तान हुनेछन् ।
Previous Post Previous post: शनिबार आराधनाको दिन – शबाथ-दिन याद राख
Next Post Next post: एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर
Copyright ©2020 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com